Fankalazana sambatra rehefa tafita any Seychelles izao ny fahatongavan'ireo mpitsidika 2020
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Fankalazana sambatra rehefa tafita any Seychelles izao ny fahatongavan'ireo mpitsidika 2020
Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Seychelles mankalaza ny fahatongavan'ireo mpitsidika
Eny an-dàlana ho amin'ny fanarenana hatramin'ny fanapahan-kevitra feno fahasahian'ilay toerana hanombohana ny fisokafan'ny volana martsa 2021, tsena iray hafa ihany koa ny tsenan'ny Ranomasimbe Indianina rehefa niditra an-tsehatra tany Seychelles ny sidina Qatar 114,859away Qatar Airways, ilay mpitsidika 678. nilatsaka tamin'ny 7:40 maraina tamin'ny Alatsinainy 11 Oktobra, nihoatra ny totalin'ny mpitsidika voarakitra ho an'ny taona 2020.
Ny mpandeha sy ny ekipa dia niarahaba ny mpandihy teo an-toerana sy ny mozika nentim-paharazana tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles.
Tonga nanolotra fanomezana fankasitrahana ho mariky ny fankasitrahana ny sampana fizahantany.
Ny sekretera talen'ny fizahan-tany Ramatoa Sherin Francis dia nilaza tao amin'ny seranam-piaramanidina fa isaky ny manan-danja dia mitaky fankalazana izany.
Ireo mpandeha sy ekipan'ny QR 233 678 dia nidina tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles tao Pointe Larue raha nahita ireo mpandihy teo an-toerana nanao feon-kira tamin'ny mozika nentim-paharazana satria nankalazaina ny zava-dehibe iray hafa teo amin'ny fampisehoana fizahan-tany ny toerana.
Nahazo mariky ny fankasitrahana ihany koa izy ireo ny Sampan-draharahan'ny fizahan-tany ho mariky ny fankasitrahana noho ny fanomezany lanja ny toerana halehan'ny nosy kely.
Tao amin'ny seranam-piaramanidina handray ny mpitsidika sy hanamarika izany zava-bita izany, ny sekretera lehiben'ny fizahan-tany any Seychelles, Ramatoa Sherin Francis, dia nilaza hoe:
“Raha jerena ny taona sarotra natrehan'ny indostrian'ny dia; isaky ny manan-danja dia mitaky fankalazana. Androany, manamarika ity zava-bita manan-danja ity isika amin'ny fankasitrahana. Roa herinandro lasa izay dia noraisinay ny mpitsidika 100,000 118 tamin'ity taona ity. Ny isa 859, XNUMX ankehitriny dia isa lehibe satria mampiseho fa Seychelles dia mijanona ho toerana tian'ny mpitsidika. Ilay tarehimarika koa a porofon'ny fientanam-po sy ny fitokanana ny asa vitan'ny birao eran'izao tontolo izao, ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria ary ireo Seychellois rehetra manampy amin'ny fanombohana ny andrin'ny toekarentsika. Andro niavonavona ho any aminay io andro io, satria tao anatin'ny 10 volana monja dia efa vitantsika izay noheverina fa tranga ratsy indrindra amin'ny paikadinay fanarenana. ”
Paikady fanamoriana marobe taorian'ny fianjeran'ny indostrian'ny fizahan-tany taorian'ny nanombohan'ny COVID dia nahitana fiakarana marim-pototra avy amin'ny tsena mpamatsy sakafo Seychelles ambony misy an'i Russia, United Arab Emirates (UAE), Israel, Alemana, France ary Suisse.
Miaraka amin'i Seychelles ankehitriny ao amin'ny lisitra nankatoavina ho an'ny UK ary koa Italia, ny fiverenan'ny sidina nataon'i Condor sy ny Air France amin'ny volana oktobra ho avy izao, ireo mpandraharaha fizahan-tany sy fandraisam-bahiny eo an-toerana dia miandry fotoana mialoha kokoa amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra sy ririnina. Ireo tsena nentim-paharazana ho an'ny mpitsidika any Eropa dia niditra an-tsokosoko.
Mampifandray ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-karena amin'ny programa vaksinim-pirenena, ny protokolan'ny fahasalamam-bahoaka ary koa ny fampiofanana COVID-fiarovana mafy sy ny fanamarinana ny orinasa, ny fizahan-tany ary ny fandraisam-bahiny, Seychelles dia iray amin'ireo tanjona voalohany nanokatra ny sisintaniny tanteraka ho an'ireo mpitsidika tamin'ny martsa 2021 , paikady izay manome valiny mazava ho an'ny firenena izay iankinan'ny fizahantany ny andrim-panjakana lehibe.